गरिबको भागमा आफ्नै लास ! – Chitwan Post
गरिबको भागमा आफ्नै लास !
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, साउन ४, २०७०
[author image=”https://fbcdn-profile-a.akamaihd.net/hprofile-ak-frc3/c0.10.180.180/s160x160/307018_2415911119861_4735907_a.jpg” ]एकल सिलवाल [/author]पछिल्ला वर्षहरुमा आत्महत्याको आँकडा अकासिँदै गएको देख्दा मलाई निष्फिक्री जिउन जन्मेका मान्छेहरु जीवनको आखिरी पल किन आफैँ तोक्दाहून् भन्ने जिज्ञासा लागिरहन्थ्यो । आफैँलाई अन्त्य गर्ने मानवीय रूचिको रहस्य खोतल्न कुनै खास ठाउँको जनजीवनलाई मसिनोसँग केलाउने इच्छा भएर पनि त्यसो गर्ने तत्परता जागिरहेको थिएन । २०६६ साल माघको सुरूतिर हिमाल खबरपत्रिकाका सम्पादक किरण नेपालले आत्महत्याको कारण र परिणामबारे खोजतलास गर्ने समाधानमुखी रिपोर्टिङको विषयवस्तु दिनुभयो । विभिन्न जिल्लाहरुसँग सम्बन्धित रहने त्यस रिपोर्टिङका लागि चितवन र आसपासका आत्महत्याहरुमाथि सामाजिक अन्वेषण गर्ने जिम्मेवारी मैले लिएँ र लगत्तै काम पनि थालेँ ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनमा रहेको आत्महत्यासम्बन्धी तथ्याङ्क विश्लेषणबाट मेरो खोजको थालनी भयो । पछिल्ला चार वर्षमा प्रहरीले राखेको आत्महत्याको अभिलेख लिएर तीन–चारवटा आधार बनाई विश्लेषण गरेँ । आत्महत्या गर्नेहरुको संख्या हरेक वर्ष नाटकीय रुपले वृद्धि हुँदै गएको अभिलेखले प्रस्ट देखाउँथ्यो । आर्थिक वर्ष २०६२÷६३ मा जिल्लाभर जम्मा ३४ वटा आत्महत्या भएको अभिलेख प्रहरीसँग थियो । अर्को वर्ष त्यो संख्या दोब्बर पनि नाघेर ६९ पुगेछ भने आर्थिक वर्ष २०६४÷६५ मा १ सय १५ । त्योभन्दा पछिल्लो वर्षको आँकडाचाहिँ थोरै भए पनि घटेर १ सयमा झरेको देखियो । त्यसबाहेक उमेर, लिङ्ग, स्थान र जातिका आधारमा ती तथ्य–तथ्याङ्कहरु मन्थन गर्दा निकै चाखलाग्दा नतिजाहरु निस्किए ।
अभिलेख लिइएका चारवटा वर्षहरुमध्ये पहिलो वर्ष आत्महत्या गरेका ३४ जनामा १८ महिला र १६ पुरूष थिए । अर्को वर्षको ६९ जनामा महिला ३२ र पुरूष ३७ थिए । तेस्रो वर्षका १ सय १५ जनामा ५७ महिला र ५८ पुरूष थिए । अघिल्लो वर्षको तुलनामा १५ जना कमले आत्महत्या गरेको आर्थिक वर्ष २०६५÷६६ को तथ्याङ्कको अर्को पाटोले भने मलाई चकित तुल्यायो । त्यसवर्ष पुरूषहरुले पछ्याएको निराशाजनक मृत्युको संख्या महिलाको तुलनामा आकाश–जमिनले फरक थियो । ३८ महिलाले ज्यान फालेको त्यो वर्ष पुरूषको संख्या ६२ पुगेको थियो । आत्महत्या गर्नेहरुको पुरानो तथ्याङ्क नियाल्दा महिलाको संख्या बढी भेटिन्थ्यो भने जति नयाँ अभिलेख पल्टायो, उति पुरूषले उछिन्दै गएको पाइएको थियो ।
जातिगत रुपमा चाहिँ आत्महत्या अँगाल्नेहरुमा सबैभन्दा बढी बाहुनक्षेत्री चौँतीस प्रतिशत, त्यसपछि थारु १६ प्रतिशत, तामाङ १० प्रतिशत र दलित नौ प्रतिशत देखिए । चेपाङ, नेवार र मगर जातिको संख्यामा दुई÷दुई प्रतिशतको समानता पाइयो । उमेरका आधारमा अभिलेख चाल्दा पहिले किशोरावस्थाका युवकयुवतीले बढी मात्रामा आत्महत्या अँगाल्ने गरेकामा पछिपछि स्वेच्छाले मर्नेहरुको ठूलो संख्या तीस वर्षभन्दा माथिको प्रौढ पुस्ता पो देखियो । यी सब आयामहरुको कारण के थियो, त्यो कोरा अभिलेखले बताउँदैनथ्यो । समाज अध्ययनमा रूचि राख्नेहरु सबैका लागि चाख लाग्दो विषय भएकाले ती नतिजाहरुको जरा केलाउन म गाउँतिर लागेँ ।
आत्महत्याबाट आफन्त गुमाएर आहत भएकाहरुमध्ये दर्जनौँ परिवारका घरदैलोमा पुग्दा मैले जेजस्ता दुर्दशाहरु देखेँ र सुनेँ, तिनका चार प्रतिनिधिमूलक चोइटाहरु सम्झन्छु ।
दृष्टान्त १ ः मंगलपुर गाविसका चेतबहादुर थापा ५१ वर्षको उमेरसम्म चार जनाको छरितो परिवारका सुखी घरमूली थिए । आठ कट्ठा जमिनबाट आउने उब्जनीले खान पुग्थ्यो । गच्छेअनुसारको पक्की घर पनि बनाइसकेकाले बासको चिन्ता थिएन । उनको त्यस्तो पारिवारिक सुख २०६४ सालमा आएर एकाएक बिथोलिन पुग्यो, जतिबेला उनकी श्रीमती मुटुको रोगले थला परिन् । उपचारमा ठूलो खर्च भयो । काम गर्ने उमेरका छोराबुहारी बेरोजगार थिए । आम्दानीको विकल्प नदेखेपछि साढे ६ लाख रूपैयाँमा भएजति खेत सबै बेचेर श्रीमतीको उपचार सुरू गरे । रोग निको हुनुको सट्टा २०६४ कात्तिकमा श्रीमतीको मृत्यु भयो । त्यसलगत्तै उनलाई पनि घाँटीको क्यान्सर देखियो । झन्डै वर्षदिनसम्म उपचार गर्दा पनि खर्च मात्रै थपियो, रोग बीसको उन्नाइस भएन । बाँकी रहेको घर पनि बेचेर सन्तानलाई सुकुमबासी बनाउनु पर्ने चिन्ताले २ कात्तिक २०६५ को साँझ खाना खाएर सुत्ने बेलामा सुटुक्क घरपछाडि बाँसको झाँङमुनि गई विषादी पिएर चेतबहादुरले आफ्नो आयु टुङ्ग्याइदिए ।
दृष्टान्त २ ः पदमपुरकी जुना पुडासैनीलाई खुट्टा झमझमाउने समस्या थियो । पटकपटक अस्पताल गएर औषधि उपचार गर्दा पनि निको भएन । सम्पत्तिको नाममा घडेरी र एउटा कच्ची घरमात्र थियो । उपचारका लागि भरतपुर अस्पताल धाउँदा छिमेकीहरुबाट ऋण लिनुप¥यो । उनको उपचारमा हिँड्दा मेलापात गरेर परिवार पाल्नुपर्ने श्रीमान्ले पनि काम गर्न पाउँदैनथे । त्यो बुझेर बिरामीलाई छरछिमेकीले नै अस्पताल आवतजावत गराइदिन्थे । त्यो हालतबाट अवाक् भएकी जुनाले ५ असोज २०६५ को राति श्रीमान् र छोरा घरभित्र निदाइरहेका बेला आँगनको बकाइनाको रुखमा झुन्डिएर देह त्यागिन् । आत्महत्याको एक महिनाअघि उनलाई अस्पताल लैजान सहायता गरेका एक छिमेकी भन्दैथिए्– ‘बिमारीले गाल्दै लगे पनि रोग निको हुनुको सट्टा खर्चमात्र भइरह्यो । आफ्नो उपचार गर्दागर्दै भएको सम्पत्ति पनि सिद्धिएर श्रीमान् र छोराले दुःख नपाऊन् भनेर आत्महत्या गरेको हुनसक्छ ।’
दृष्टान्त ३ ः गीतानगर–४, देवनगरमा खगेरी नहरको वरपर ३५ वर्ष पुरानो सुकुमबासी बस्ती छ । त्यहाँ बस्ने दर्जनौँ परिवार ज्यालानिमेक गरेर पालिँदै आएका छन् । तिनैमध्ये एक परिवारका अगुवा थिए, केशव कुमाल । मुलुकमा चर्केको सशस्त्र द्वन्द्वले उनको परिवार पनि अछूतो रहन सकेन । केशवले न आफ्नो लागि काम पाए, न त हुर्किएका छोराछोरीलाई नै कुनै आयआर्जनको बाटोमा अल्झाउन सके । चार छोराछोरी र दम्पती गरी ६ जनाको परिवार पालिन गाह्रो भएपछि सबैले जे काम पाइन्छ, त्यही गरेर हातमुख जोर्नुपर्ने अवस्था आयो । २०६२ सालमा सबैभन्दा सानी छोरी नौ वर्षकी थिइन् । उनलाई दुई कक्षामा पढ्दापढ्दै स्कुल छुटाएर भरतपुरको एउटा घरमा कामदार बसेर पेट पाल्न पठाए । परिवारका बाँकी सदस्यले पाएसम्म ज्यालानिमेक गरेर गुजारा चलाउनु पर्ने भयो ।
कमाइ थोरै, खाने मुख धेरै भए । चर्किंदो महँगीको रापमा अभावको जिन्दगी अभिशाप बन्दै गयो । भोको पेटको पीडाले परिवारमा कलह निम्त्यायो । बाबुछोराबीच झगडा हुन थाल्यो । त्यही निहुँमा केशवका १७ वर्षीय छोरा अशोकले २३ कात्तिक २०६२ को दिन आफ्नै छाप्रोभित्रको बलोमा झुन्डिएर आत्महत्या गरे । त्यो वियोगपछि पनि कुमाल परिवारलाई अभावले आक्रान्त पार्न छाडेन । केशव क्षयरोगबाट ग्रसित भए । कहिलेकाहीँ काम गरेर कमाउन पनि शरीरले साथ दिन छाड्यो । त्यसको बोझ उनकी श्रीमती, दुई छोरी र बाँकी रहेका कान्छा छोराको काँधमा प¥यो । २०६५ वैशाखमा उनको परिवारलाई दिनभर दाउरा खोजेर नबेचे राति भोकै निदाउनु पर्ने नियति आइलाग्यो ।
रोगले गलेका केशव दाउरा खोज्न जान पनि नसक्ने भए । जीवनदेखि हरेस खाएका उनले १७ वैशाख २०६५ को राति श्रीमती छिमेकीको घरमा टेलिभिजन हेर्न गएको मौका छोपी मस्त निदाएका छोराछोरीले चाल नपाउने गरी तीन वर्षअघि छोरो झुन्डिएकै बलोमा पासो लगाएर प्राणान्त गरे । दुई पुस्ताको ज्यान लिने गरिबी कुमाल परिवारमा म पुग्दा पनि ज्यूँका त्यूँ थियो । त्यो असहाय परिवार गाउँकै साहूको एउटा गरो खेत अधियाँ कमाएर ज्यालानिमेकमै गुजारा चलाइरहेको थियो । मृतक केशवका कान्छा छोरा कामको खोजीमा भारततिर भासिएका थिए ।
दृष्टान्त ४ ः गरिबीकै कारण भविष्यमा परिवार पाल्न कठिनाइ नहोस् भनी दुईमात्र सन्तानको सानो परिवार बसालेका थिए, मंगलपुरका चन्द्र्र परियारले । २०६१ सालको एक बिहान उनले आफ्नो १४ वर्षको छोरो विमल एउटा पसलमा चोरी गरेको आरोपमा गाउँका अरु तीन जना केटाहरुसँगै समातिएको खबर सुने । प्रहरी कार्यालयले परियारलाई छोरो भेट्न बोलायो । हिरासतमा रहेको बालक छोरोलाई प्रहरीहरुले निर्घात कुटिरहेको बेला उनले देखे । त्यो दृश्यले उनलाई सही नसक्नु पीडा भयो । त्यसपछि सरासर घर गएर श्रीमतीलाई खाना पकाउन अह्राई आफू नुहाउन भनी नारायणी नदीतिर लागे । दुई घन्टासम्म नफर्किएपछि खोज्दै जाँदा घरदेखि उत्तरतर्फ पर्ने नारायणी नदीकिनारनजिकैको एउटा रुखमा झुन्डिइरहेको शव उनकै श्रीमतीले भेटिन् । केही दिनपछि छोरा छुटे तर बाबु थिएनन् । आफूले गाली पनि नगरी हुर्काएको छोरो पक्राउ पर्नु र प्रहरीबाट कुटिनुको कारण आफ्नो गरिबी नै हो भन्ने बुझेपछि सहन नसकेर आत्महत्या गरेको अनुमान लगाउँदै चन्द्रकी श्रीमती मसँग बेस्सरी रोइन् । त्यसदिन म हारेको सिपाहीझैँ निराश र निस्सार अनुहार लिएर घर फर्किएको थिएँ ।
चितवनमा अकासिँदो दरमा बढिरहेको आत्महत्याको पछाडि गरिबी जोडिएका यी केही नमुना मात्र थिए । आर्थिक वर्ष २०६२÷६३ को सुरूदेखि २०६६÷६७ को पुस मसान्तसम्म जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा आत्महत्याका ३ सय ६६ वटा घटनाहरु रेकर्ड भएका थिए । तीमध्ये अधिकांशको प्रमुख कारण गरिबी र बेरोजगारी तथा त्यसबाट उत्पन्न निराशा, तनाव, रक्सीको कुलत र कलह नै थियो भन्ने निष्कर्षमा म पुगेँ । गरिब किसान र भूमिहीन सुकुमबासी बस्तीहरु धेरै भएका गाउँहरु आत्महत्याको अखडाका रुपमा पाइए ।
चितवनको पिप्ले गरिब बस्ती बाक्लो भएको गाउँ हो । त्यहाँ साढे चार वर्षमा सबैभन्दा बढी २२ जनाले आत्महत्या गरेको तथ्याङ्क प्रहरीसँग थियो । त्यसपछि सँगै जोडिएको उस्तै खालको गाउँ भण्डारा र नदीले जमिन काटेर बर्सेनि सुकुमबासी थपिने मेघौली गाविसमा त्यस अवधिभित्र आत्महत्या गर्नेहरुको संख्या १८÷१८ रहेको देखियो । मंगलपुर, कठार, पदमपुरजस्ता सुकुमबासी बहुल गाउँहरु आत्महत्या हुने तेस्रो कोटीका गाउँहरु थिए । यी प्रत्येक गाउँमा साढे चार वर्षमा १५÷१५ जनाले ज्यान फालेका थिए । यी गाउँहरुमा यति धेरै मान्छे एक दशक लामो सशस्त्र द्वन्द्वमा पनि मारिएका थिएनन् ।
निराशा र मृत्युको रिपोर्टरुपी अग्लो पहाड पैदा भएपछि हिमालका सम्पादक नेपालसँग संवाद भयो । अरु जिल्लाहरुबाट पनि यस्तै नतिजा आएछन् । गम्भीर सुझबुझ र सरसल्लाहपछि हिमालको सम्पादन मण्डल यस्तो कहालीलाग्दो समाचार पाठकहरुलाई नपस्किने निष्कर्षमा पुग्यो । तदनुरुप मैले समृद्धिस्वप्नका ती सहिदहरुलाई सम्झँदै महिना दिनको मेहनत कम्प्युटरको कुनामा लुकाइछिपाइ राखेँ । भोक र शोकको यो सौगात आज तपाईंसामु फुकाएको छु । हाम्रा गाउँहरुमा हरेक दिन गरिबीसँगको अखण्ड युद्धमा जीवनदेखि हारिरहेका निर्दोष नागरिकहरुको संख्या १० वर्षे द्वन्द्वमा मारिएभन्दा ज्यादा छ । यो समाजमा यस्ता अनगिन्ती मृत्युको साक्षी भएर निदाइरहेका हामी कहिले जाग्ने ?
(गोपनीयताका लागि मृतकहरुको नाम परिवर्तन गरिएको छ ।­)
वर्षाका कारण बेनी–मालढुङ्गा सडक अवरुद्ध
महिला पूजारीको उदाहरणीय कार्य